Britain waxay isu diyaarineysaa inay Huawei siiso marinka shabakada 5G – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Britain waxay isu diyaarineysaa inay Huawei siiso marinka shabakada 5G
Britain waxay isu diyaarineysaa inay Huawei siiso marinka shabakada 5G
Raiisel wasaaraha Ingriiska Boris Johnson ayaa isu diyaarinaya inuu siiyo Huawei shiine fursad ay ku hellaan shabakada 5G mustaqbalka ee Boqortooyada Midowday, in kasta oo laga cabsi qabo basaasnimo.
Go’aanka Boris Johnson ee taageeraya go, aanka, Teresa May, Raiiselwasaarihii hore ee Ingiriiska, oo kicisay xiisadda Golaha Wasiirrada, sida ay qortay The Sunday Times.
Sida uu qoray wargaysku, ilaha heerka sare ee dawladda iyo ilaha adeegyada amniga: Boqortooyada Midowday waxay u dhaqaaqaysaa go’aan u oggolaanaya Huawei inay marin u hesho qaybaha aan xasaasiga ahayn ee shabakadda.
Tallaabadan ayaa UK gelinaysa isku dhac xagga Mareykanka ah, kaasoo mamnuucay Huawei sababta oo ah cabsi laga qabo inay ku dhowdahay hay’adaha sirdoonka Shiinaha.
Golaha Amniga Qaranka Ingiriiska ayaa loo qorsheeyay inuu gaaro go’aan kama dambeys ah toddobaadkan kaas oo u oggolaanaya shirkadda weyn ee teknolojiyadda Shiinaha Huawei inay soo gudbiso shabakadaha cusub ee xogta 5G ee Boqortooyada Midowday.
Kooxda qarsoodiga ah ee wasiirrada sarsare iyo saraakiisha amniga waa in ay kulmaan kadib wadahadalada hordhaca ah waxay ku taliyeen in shirkada muranka dhaliyay laga saaro dhinacyada muhiimka ah ee shabakada.
Shaqaalaha dawladda Ingiriiska waxay filayaan in kooxda raysalwasaaraha ay taageerto go’aan u oggolaanaya shirkadda inay siiso qaybo aan muhiim ahayn, sida anteenooyin, kaabayaasha internetka ee xawaaraha dheereeya.
In kasta oo ay jiraan faahfaahin yar oo ku saabsan waxa ay taasi ka dhigan tahay, haddana warbixinno hore ayaa soo jeedinaya in kuwani ay noqon doonaan meelaha ay waxyeello ka soo gaarto ilaalinteeda Shiinaha, haddiiba ay jiraan, waa la xaddidi doonaa.
Kulankii hore ee Huawei ayaa sababay duufaan ka dhex dhacay golaha wasiirada ka dib markii ra’iisul wasaarihii hore Theresa May ay ceyrisay xoghayihii gaashaandhigga Gavin Williamson si uu faahfaahin uga siiyo kulanka warbaahinta saxaafadda.
Aqalka Cad ayaa ku booriyay xulafada inay ka fogaadaan shirkadda, iyagoo ku eedeeyay basaasnimo, dacwad ay shirkadda Shiinaha ku celcelisay way beenisay, laakiin Jarmalka ayaa sheegay usbuucii hore inay Huawei siin doonto marinka shabakadaha.
Dabaqyo hore ayaa soo jeediyay in afarta shirkadood ee waaweyn ee UK – EE, O2, Saddex, iyo Vodafone – ay qalabka Huawei ku isticmaalayaan shabakadooda 5G.
In kasta oo shirkadaha isgaarsiinta ay ka warqabaan walaac laga qabo in Shiinaha laga yaabo inay waydiisato Huawei inay u isticmaasho qalabkeeda si ay ugu basaasto bartilmaameedyada gaarka ah ee Boqortooyada Midowday, shirkadaha waxay leeyihiin dhiirigalin ganacsi oo adag si ay u qaataan qalabka Huawei.
Tani waxay ka caawin kartaa iyaga inay dhisaan shabakado kala jaad jaad ah oo aad u yar si ay si toos ah ugu guuldareystaan, kuna qasbi karaan kooxaha waaweyn ee isgaarsiinta sida Ericsson iyo Nokia inay bixiyaan qiimeyaal badan oo tartan badan.
Previous articleMidowga Yurub wuxuu ka hadlayaa dib u dhigida Brexit 3 bilood
Next articleBritain is preparing to give Huawei access to the G5 network